Home » Buddhism » မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၃)
ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေအတွက် အသုံးမတဲ့ဘူးဆိုလျှင် မြန်မြန်ဖြူသွားပါစေ၊ မြန်မြန်ပျောက်သွားပါစေ။ မောင်မိုးပြာတို့ကလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုမှာပါ။ လူတို့အတွက် ဘာအကျိုးမှ မဖြစ်ထွန်းဘူးဆိုလျှင် ဘာအတွက် ဆုပ်ကိုင်ထားကြမှာလည်း။
ပြောဆိုချက်စကားတွေထဲက စကားလေးတစ်ခွန်းထဲကို ကွက်ကွက်ကလေးထုတ်ပြီး မပြောမိဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ မောင်ဖြူ ဝမ်းလျှောနေသည်ကို ဆရာဝန်နှင့်ပြ၍ ကုသလိုက်သောကြောင့် သက်သွား၏။ ဒီစကားမှာ မောင်ဖြူ ဝမ်းလျှောနေသည် ဆိုတဲ့ စကားကို သာ နားထောင်ပြီး တစ်ခြားစကားတွေကို နားမထောင်ဘူးဆိုပါက နားလည်မှုတွေလွဲစေပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဗုဒ္ဓရဲ့အသိဥာဏ်ကို ရရှိပါမှ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ကြမယ် မဟုတ်ပါလား။
ဟိုက်…. ဤသို. ပြောယုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ အမှန် ရှာဖွေနိုင်လျင် ဗုဒ္ဓသည် အပိုအလုပ်များ လုပ်ခဲ့လေသလော
လွယ်လှချည်လားလို့ ပြောနေတဲ့ ကိုယ့်လူရေ.. စိတ်ကူးယဉ်အတွေးတွေကို မြောင်းထဲ၊ ကျောင်း ထဲမှာသာ မျောပြစ်လိုက်ပါလို့ပဲ အကြံပြုပါရစေ။ ဘုရားသွား၊ ကျောင်းတက်တိုင်း ဘုရားတရားကို မသိနိုင်ဘူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ တရားမသိသူဟာ ဘုရားနောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို တရားသိသူလို့ ၀န်ခံနိုင်ပါသလား..၀ဋ်(၃)ပါးကို လူမကျော် ပဲ လှည့်ပြနိုင်ပါသလား၊ ကိုယ်တိုင်သိနှင့်လောကအမှန် ထိုနှစ်တန်ကို မကျော်လွန်ဖို့ တောလိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျော်ရင်ဖြစ်ဖြစ် လျှော်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတရားနှင့် တခြားစီလို့ပဲ ပြော ပါရစေ။ ၆နှစ်ကျင့်လို့တရားရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ရိပ်သာသွားလို့တရားရတာလား ဖြေကြစေ ချင်ပါသည်။
တို့ကတော့ ပြာပြာ၊ ၀ါဝါ… စိတ်မ၀င်စားဘူး…။ ကံ..ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို နာခံမယ်..။ ဒါပဲ နားလည်တယ်။ တရားတော်က နှလုံးသားနဲ့ လက်ခံနားလည် ကျင့်ဖို့ပဲ လိုတယ်။ ၀ါဒီများနေရင် ဘုရားရှင်လက်ထက်က ငါးကြီးလို ဖြစ်သွားဦးမယ်…. ဘာငါးကြီးလဲတော့ စာအုပ်မှာ ရှာဖတ်တော့…
မောင်မိုးပြာတို့ကလည်း ကံ ကိုပဲပြောနေတာပါ Koyin Sithu။ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ ဒီကံသုံးပါးရဲ့ လူကို ဒုက္ခရောက်စေပုံကို ပြောနေတာပါ။ ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ ထိမ်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကတော့ Koyin Sithu တို့ကို သွင်သင်ပြနေကြတဲ့သူတွေတောင် မတူကြဘူးမဟုတ်လား။
ကိုnan shin ရေ အကျိုးမပါတဲ့စာဆိုတာ ဘုရားတရားစာလား၊ ဘုရားက ကံ (၃)ပါးကို ရှင်းလင်းတာနော်။ကံသုံးပါးကို နားမလည်ရင် သူ့ရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို မသိတာ သေချာတယ်။ မသိလို့လည်း တိုက်ခိုက်ခိုးဆိုးနေတာပေါ့။ ဘာမှ မလုပ်ပဲနေတာ ဟာလည်း တရားနှင့် နေသူမဟုတ်ပါ။ ရှောင်သင့်တာ ရှောင်ပြီး၊ ဆောင်သင့်တာလုပ်သင့်တာ လုပ်တာမှသာ တရားနှင့်နေသူလို့ ဆိုရမှာပါ။ အမှန်တရားကို ကျမ်းဂန်စာပေနှင့်မတိုင်းသင့်ပါ။ အမှန်တရားဟာ စာပေမဟုတ်သလို၊ ကျမ်းဂန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားဟာ တရားသာ(အလယ်လမ်း)ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဘက်လိုက်စဉ်းစားနေတာဟာ အမှား မြင်သူသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘုရားက အလကားကောင်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
မိုးပြာပိုစ်များတွင် တခြားဘာသာဝင်များကို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာဟူပြီး သုံးနှုန်းနေမှုသည် တခြားဘာသာကို နှိမ်ချသော ခွဲခြားသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ စကားနက်ကိုတောင် အမှန်ကျသိမြင်မှု မရှိကြတော့ဘူလား။ တကယ်တော့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဆိုတာ အမြင်မှားကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘယ်မှာ အမြင်မှားတာလဲ…ကံအပေါ်မှာ၊ ဘ၀အပေါ်မှာ၊ သင်္ခါရအပေါ်မှာ၊ ခန္ဓာအပေါ်မှာ….ဒါတွေအပေါ်မှာ အမြင်မှားတာကို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ ဆိုတာလောက်တောင် နားမလည်ကြတောဘူးဆိုတော့ ကိုယ်ထင်ချင်ရာထင်၊ ကိုယ်မြင်ချင်ရာမြင်ဖြစ်ပြီး ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့ ရမ်းကြတော့တာကိုး။
အပေါ်ကပို့စ်က… နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယက (မဟန) အဖွဲ့ကိုတင်တဲ့စာကို ပြန်ဖေါ်ပြနေတာဆိုရင်တော့.. သမိုင်းအချက်အလက်ဖြစ်တယ်လို့.. ယူဆရမှာပါ..။ ပြန်ပြင်ဆင်ခြင်း..တည်းဖြတ်ခြင်း မလုပ်ရ/သင့် ပါဘူး..။
ကြိုးစားပြီး ဖော်ပြပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ရှေ့က သွားခဲ့တဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သင်္ခန်းစာယူနိုင်ကြစေဖို့ပါ။